Booliska oo dib u helay gaari laga xaday xaaska Peter keneth – The Voice of Northeastern Kenya
Booliska oo dib u helay gaari laga xaday xaaska Peter keneth
Booliska dalka ayaa waxa ay dib u heleen gaari ay iska leedahay xaaska musharixi hore ee xilka madaxweynenimo ee doorashadi sanada 2013-ka Peter Keneth waxana gaarigaas laga helay magaalada Malaba ee hoostagta countiga Busia.
Gaarigan ayaa waxa ay dabley aan heybtooda la garaneynin ay ku dhacayn xaafada Spring Valley ee magaaladatan Nairobi habeenka sabtida waxana la soo xiray hal nin oo lagu tuhunsan yahay in u kamid ahaa dadki dhaca u geeystay haweeneydaas ah xaaska Peter Keneth.
Saraakiisha waxda dambi barista ee u fadhigooda yahay Gigiri ee magaaladatan Nairobi ayaa waxa ay aroornimada saaka u safreen Magaalada Malaba si ay halkaas uga soo qaadan gaarigaas iyo ninka lala qabtay.
Ms Ann Wanjiru iyo wiil u adeer u yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa labaduba dhac loogu kala geeystay xafaada Kyuna Estate ee Spring Valley.
Wiilka u adeerka u yahay madaxweyne Uhuru,xaaskiisa iyo gabar u dhalay oo dhamaantood isla wada socday ayaa kadib marki gaarigooda laga dhacay ayaa dadka dhaca u geestay waxa ay u la dhaqaaqen meel 10 kilomitir u jirta goobta ay dhaca ugu geeysteen waxana goobtaas looga tagay iyago aysan burcadaas waxyeelo gaarsiinin.
Daqiiqada yar uun kadib marki dhaca loo geestay Wilka u adeerka u ahaa madaxweynaha ayaa waxa iyadana dhac loo geestay xaaska Peter Keneth oo isla goobta wiilka u adeerka u yahay madaxweynaha iyadana looga soo tagay.
← Manchester United oo si rasmi ah u la soo wareegtay Paul Pogba
Wasiirka difaaca dalka Iraq oo ka badbaaday dil →